खुल्यो करण-कार्तिक बिच को झगडाको कारण !! - Sawal Nepal
खुल्यो करण-कार्तिक बिच को झगडाको कारण !!
काठमाडौं एजेन्सी २०७८ बैशाख १४, १४:३०
निर्माता/निर्देशक करण जोहरले अभिनेता कार्तिक आर्यनलाई ‘दोस्ताना २’ बाट निकालेको खबरले गत साता बलिउडमा हल्लीखल्ली मच्चाएको थियो। करणको धर्मा प्रोडक्सनले आगामी दिनमा अभिनेता कार्तिकसँग कुनै काम नगर्ने खबर समेत बाहिर आयो।
करण र कार्तिकबीच मनमुटाव यतिसम्म बढ्यो कि यी दुईले इन्स्टाग्राममा अनफलोसमेत गरे। सामाजिक सञ्जालमा यी दुईमध्ये एकको पक्ष लिएर बहससमेत भए। कसैले कार्तिकलाई अव्यवसायिक भएको भने, कसैले अभिनेत्री जान्हवी कपुरसँग कार्तिकको ब्रेकअपलाई कारक माने। यो झगडाको ठोस कारणबारे हालै बलिउड हंगामाले थप जानकारीसहित बिस्तारमा लेखेको छ।
दुई वर्षअघि ‘दोस्ताना २’ मा जोडिने बेला कार्तिकको पारिश्रमिक भारतीय रुपैयाँ दुई तीन करोड थियो जुन अहिले १० करोड भइसकेको छ। कार्तिकले सुरुमा करणलाई पारिश्रमिक बढाउन आग्रह गरे। फिल्म छायांकन भइसकेपछि पैसा बढाउने कुरा अव्यवसायिक लाग्यो। उनले कार्तिकलाई उनले अर्को ‘मिस्टर लेले’को खेलाएर भनेर मनाउने प्रयास गरे। यो प्रस्तावमा कार्तिक पनि सहमत भइसकेका थिए।
तर करणले आफूलाई जानकारी नदिई आफ्नो ठाउँमा अभिनेता विकी कौशललाई फिल्म दिएको थाहा पाएपछि कार्तिकले विश्वास गर्न सकेनन्। धर्मा प्रोडक्सनबाट निर्माण हुने शशांक कैतनको योद्धामा अभिनेता शाहिद कपुर छनोटमा परेपछि उनी निराश भए। केही समयपछि योद्धामा शाहिदले काम छोडिसक्दासमेत कार्तिकलाई कुनै पनि भूमिकामा काम प्रस्ताव आएन।
अलिपछि करणले कार्तिकसँग क्रिकेटबारे बन्ने गुन्जन सक्सेनका निर्देशकको फिल्मका लागि प्रस्ताव राखे। फिल्म बीचमै छोड्नु नपरोस् भनेर कार्तिकले लिखित सम्झौताको माग राखे।
स्रोतको हवाला दिँदै लेखिएको बलिउड हंगामाले लेखेको छ, ‘यसैबीच कार्तिकले कोभिड १९ का कारण ‘दोस्ताना २’ छायांकनका लागि समय दिन असमर्थ भएको बताउन थाले र करणले पनि खासै दबाब दिएनन्। तर जब कार्तिक धमाका फिल्मका लागि समय दिन थाले करण निराश बने। उनीहरुले भित्री बैठक बस्यो र करणले आफ्नो असन्तुष्टि पोखे।’
खबर अनुसार करणले कार्तिकलाई शरण शर्माको आगामी फिल्ममा सम्झौता गरेमात्र ‘दोस्ताना २’ मा काम गराउने शर्त राखे। एकआपसमा विश्वासको संकट बढिसकेको करणले स्क्रिप्ट र स्क्रिनप्ले लक नभइन्जेल ढुक्क हुन नसिकने बुझिसकेका थिए।
करणले अप्रिल २०२१ बाट ‘मिस्टर लेले’मा विकी कौशल र जान्हवी कपुरका साथ कार्तिकलाई लिएर फिल्म छायांकनका लागि तयार भएको बताए। तर कार्तिकले यो समयमा दोस्ताना २ का लागि मात्र समय मिल्ने जवाफ दिए।
कार्तिकको यस्तो जवाफको आसय बुजेका करण कार्तिकसँग झोक्किए। उनी कार्तिकसँग साँच्चिकै दु: खी थिए किनकी जान्हवीले दोस्तोना २ र ‘मिस्टर लेले’मध्ये एक फिल्म रोज्नुपर्ने भयो। यो मोडमा आइपुगेपछि करण र कार्तिकबीच कुराकानी हुन छोड्यो। करण र कार्तिकको सम्बन्ध बन्द कोठाबाट बिस्तारै सामाजिक सञ्जालमा छताछुल्ल हुन थाल्यो।
यो मनमुटाव र दुरी बढ्नुमा करणले कार्तिकको अव्यवसायिकतालाई दोष दिए। अर्कोतिर कार्तिक आफू फिल्मको मुख्य आकर्षण हुँदाहु्ँदै पनि अत्यन्त न्यून पारिश्रमिक पाएको ठानिरहेका थिए। अझ करणको धर्मा प्रोडक्सनले दोस्रो फिल्ममा काम दिन वाचा पनि पूरा नगरेकोमा निराश थिए।
‘कार्तिकको जान्हवीसँग ब्रेकअपका कारण उनीहरुको सम्बन्धमा पनि समस्या देखियो‍ र यसले ठूलो झगडाको रुप लियो। अन्तमा अरु झगडाजस्तै यो विवादमा पनि पैसा केन्द्रमा आयो। अरु सबै समस्या हल हुन्थे होलान् तर अव्यवसायिकताले समस्यालाई अर्कै तहमा पुर्याइदियो। करणसँग कार्तिकलाई दोस्ताना २ बाट बर्खास्त गर्नेबाहेक अर्को विकल्प रहेन,’ बलिउड हंगामाले थप लेखेको छ।
कार्तिकको निस्कासनपछि ‘दोस्ताना २’ जान्हवी, लक्ष्य र नयाँ अभिनेताका साथमा बन्ने भएको छ।
‘जर्सी’मा साहिदको जोडी बन्‍न रश्मिकाले किन गरिन् अस्वीकार
ओलीले माधव नेपाल पक्षलाई भने-आउनुस्, केही समस्या भए छलफल गरौं
सर्वाधिक उचाईमा ‘स्ट्याण्डअप कमेडी’को विश्व किर्तिमान राख्दै ‘नेपग्याजम कमेडी’